Talooyin iyo tabaha in iibi Old iPhone u qaado lacagta ugu badan
Iibi Old iPhone Liiska iyo Xagee & Sida loo iibi qiimo wanaagsan
Waxaa dabiici ah in ay u baddashaan phone cusub telefoonada cusub smart la sii daayay maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, inta ku riyaaqayaa aad telefoon cusub, waa in aad iloobin hore loo isticmaali iPhone. Si ay dadka u baahan telefoonka loo isticmaalo Waxaad ka iibsan kartaa. Waad ogtahay, kun oo qof oo aan awoodin telefoonada cusub smart, gaar ahaan-dhamaadka sare iPhone, ku nooshahay u dhow. Oo wax deegaanka iyo lacagta tixgelin, waa in aad iibiso isticmaalo iPhone. Hoos waxaa ku qoran macluumaad loogu talagalay sidii ay u iibiso iPhone duug ah lacagta ugu badan iyo sida ay u iibiso isticmaalka jir iPhone si fudud. Weeyna u maleeyeen in aad doorato sida saxda ah iyo qiimaha saxda ah inay iska iibiso aad loo isticmaalo iPhone. Ka sokow, ka hor inta iibinta iPhone, waa inaad fiiro gaar ah u liiska hubinta, kaas oo kaa caawin doona inaad ka fogaato dhibaatooyinkoodii. Hadda Fiiri info soo socda.
Qaybta 1. Halkee iyo Sidee loo iibi aad u isticmaala iPhone u Money ugu - Fiiri Top 10 Dukaamada
Qaybta 2. Liiska Iibinta iPhone aad isticmaashay
Qaybta 3. Qiimaha List u isticmaalay iPhone Iibiya maalinta Arbacada ah
Qaybta 1. Top 10 Dukaamada inay iibiso Old iPhone
Range Price: $ 0 ~ $ 336
Payment Habka: Apple Gift Card
Delivery Time: markab hore iPhone kadib marka xigasho ka Apple
Sida loo iibi, Tag dukaanka Apple inay ka qaybgalaan "ayuu isticmaalka iyo Dib" barnaamijka > jawaab su'aalo ku saabsan isticmaalo iPhone si aad u hesho quote> aqbal xigashada iyo waxay bixiyaan macluumaad la xiriir> Ship aad loo isticmaalo iPhone in Apple> siiyo kaarka hadiyadda ama credits.
Fiiro Gaar ah: Tani ma aha barnaamijka Ganacsiga ee Apple ayaa. Haddii aad rabto in aad kor u qaaddo jir iPhone in model cusub, waa in aad codsato barnaamijka ganacsiga ee Apple ayaa, kuwaas oo aad u baahan tahay, in aad loo isticmaalo iPhone keeno Apple Tafaariiqda Store> heli xigasho ka shaqaale Apple Store> aqbali xigashada iyo aad u hesho kaarka hadiyadda ama dhibco iPhone cusub> isticmaalin kaarka hadiyadda iyo lacag caddaan ah si ay ugu bixiyaan iPhone cusub. Barnaamijka Ganacsiga ee Apple ayaa KALIYA marka aad u cusboonaynta hore iPhone si iPhone cusub.
Payment Habka: PayPal (si weyn lagu talinayaa) ama wax kasta oo hababka kale ee lacag bixinta aad iyo iibsadaa heshiis gaari karaan.
Delivery Time: waxay ku xiran tahay in aad ku
Sida loo iibi, Tag website craigslist iyo doorato meesha aad> Riix taleefannada gacanta ee degaanka iib> galaan faahfaahin dhajiyay (qiimaha, sharaxaad, sawirada aad iPhone, la xiriir macluumaad) ku iibiyeen hore used iPhone. Iibsada la fili karo iyaga arki doonaa. > Kulan la iibsada> Hel bixisay iyo samatabbixin hore iPhone
Fiiro gaar ah: Haddii aad tahay qof wanaagsan ee gorgortanka, hubi in aad ugu craigslist ka heli doonaa. Laakiin iska dhawra u emaillada iyo scammers. Marka aad la kulanto wax iibsadaa ah, waxaa dhaanta inay isaga ama iyada la kulmo meel dadweynaha. Waxaa aad uga badbaado.
3. Arbacada ah
Price Range: $ 230 - $ 430
Habka Payment, PayPal
Delivery Time: ka dib markii lacag (haddii aad jeceshahay, waxaad awood karaa pickups ee-guriga adeegga)
Sida loo iibi: Diiwaangeli account Arbacada ah la macluumaadkaaga shakhsiyeed (xiriirada, email, cinwaanka, lambarka kaarka deynta, lambarka telefoonka gacanta)> Liiska kuqor hore iPhone: daro sharaxaada, sawiro, qiimaha (waxaad sameyn kartaa xaraashka ah oo aad telefoon ama a qiimaha go'an), iyo maraakiibta fursadaha> haddii aad wargelin ka soo Arbacada ah in wax iibsadaa ayaa bixiyay, markab hore iPhone in wax iibsadaa> Print calaamadda maraakiibta maraya My Arbacada ah oo soo ururiyo lacagta dhex PayPal. Si aad wax badan oo ku saabsan geeddi-socodka iibinta aad loo isticmaalo iPhone bartaan, akhri hagaha telefoonka iibinta >>
Talooyin: hor taxay aad iPhone isticmaalo maalinta Arbacada ah u iibiyay, waa in aad ka raadin Arbacada ah ee model la mid ah si aad u aragto qiimaha hadda oo caan, sida ay dadka u tilmaami taleefannadooda. Noocan ah macluumaadka waa mid aad waxtar u tixraac marka aad dhajinta iyo dejinta qiimaha (xaraashka ama qiimaha go'an) ee aad loo isticmaalo iPhone.
Price Range: $ 120 - $ 408
Payment Habka: Amazon Gift Card
Delivery Time: Markab ka hor inta aadan lacag
Sida loo iibi: Diiwaangeli xisaab ee amazon.com> Dooro Electronics Trade-In qaybta of Electronics> Dooro isticmaalo model iPhone iyo jawaabi qaar ka mid ah su'aal ku saabsan> Hel xigasho iyo markab aad iPhone> siiyo Amazon, iyadoo hadiyad card. Wixii faahfaahin dheeraad ah oo loogu talagalay sidii ay u ganacsadaan-in aad used iPhone in Amazon, guji halkan >>
Habka Payment: Hubi ama PayPal
Delivery Time: ka dib markii ay aqbalaan xigasho ka BuyMyTronics.com
Sida loo iibi, Tag buymytronics oo heli model iPhone aad> Jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha ku saabsan jir ah iPhone iyo aad u hesho qiyaasta> Dooro habka lacag bixinta (Sax ama PayPal)> markabka hore iPhone> lacag. Hubi macluumaad faahfaahsan oo loogu talagalay habka iibinta >>
Talooyin: haddii aad rabto in aad iibiso jir iPhone ee BuyMyTronics qiimo fiican, waa inaad fiiro gaar ah u sida loo qeexo telefoonka, sababtoo ah qiyaasta idiinku siiyey in la xukumo sida ay qeexida. Waxa aad ku celin kartaa habka of jawaabay su'aalo ku saabsan iPhone. Waa OK.
Price Range: $ 148 - $ 346
Payment Habka: Hubi ama Gift Card
Delivery Time: keeno dukaanka leben-iyo malaastiisa ama markab kadib marka xigasho ka Best Buy
Sida loo iibi, Tag Best Buy iyo heli model iPhone aad> hesho jir iPhone qiyaasay oo heli xigasho> heli a Best Buy dukaanka doorbidayso deegaanka> keena jir iPhone si maxalli ah Best Buy Store> Hel ah kaarka hadiyadda.
Habka Payment, PayPal, hubi ama Amazon Gift Card
Delivery Time: ka dib markii ay aqbalaan xigashada online
Sida loo iibi: Ugu Gazellet, heli model iPhone aad> sheeg wax ku saabsan jir ah iPhone iyo aad u hesho qiyaasta> Xaqiiji habka dalab iyo bixinta> Ship iPhone in Gazellet> lacag.
Payment Habka: Walmart eGift Card
Delivery Time: ka dib markii ay aqbalaan xigashada
Sida loo iibi, Tag website Walmart si ay u dhamaystiraan qiimaynta aad jir iPhone> markab aad loo isticmaalo iPhone> hesho email xaqiijin heshiis iyo xaqiijin waxaa> qaadato lacagta.
Si aad wax badan oo ku saabsan barnaamijka ganacsiga ee ka bartaan, hubi goobta rasmiga ah ee Walmart >>
Payment Habka: PayPal, hubi, Gift Card, iwm
Delivery Time: dib markii uu xaqiijiyay in heshiiska
Sida loo iibi, Tag NextWorth oo ay helaan nooc ka iPhone aad> Dooro jawaabo preconfigured su'aasha si aad u hesho xigasho> markab aad iPhone isticmaalo via FARAKUHAYNTA for free> lacag.
Range Price: $ 72- $ 300
Payment Habka: Gift Card
Delivery Time: ka dib xigashada
Sida loo iibi: Raadi model iPhone aad> hesho qiimo waxaa u> markab ama u geeyn RadioShack maxali ah> siiyo kaarka hadiyadda
Qaybta 2. Liiska iibiyeen iPhone aad loo isticmaalo
1. Hubi in aad ka buuxiyo shuruudaha heshiisyada aad la leedahay side haddii aad iPhone ayaa haatan qandaraas. Tusaale ahaan, aad bixisay rigoore u bedesheen telefoonada ka hor dhamaadka heshiiska adeega;
2. saar heshiisyada iyo macluumaad side aad ee liiska una sheeg in aad wax iibsadaa. Macluumaadkan waxaa kaa caawin doontaa iibsadaha si aad u bilowdo telefoonka aad iibiso ama isagii;
3. kaabta aad xogta iPhone jir in aad telefoon cusub ama kaliya waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer;
4. Ha ogolaan in xogta ku saabsan iPhone . Dejinta aad iPhone in qalab cusub oo xaqiiqo ah oo aan ku filayn, sababta oo ah qaar ka mid ah macluumaadka gaarka ah weli ka jiraan on your iPhone oo la soo kabsaday karaa qaar ka mid ah software soo kabashada. Waxaad u baahan tahay oo dhan tirtiro xogta si joogto ah;
5. tuurid SIM card ka hore iPhone. SIM ku jira macluumaadkaaga shakhsiyeed, sida xiriirada, fariimaha, iyo macluumaad kale;
6. Hel aad iPhone dabooli aad iPhone;
7. nadiifi aad iPhone maro nadiif ah, taas oo u muuqdo nidaamsan oo cusub;
8. Qaado a photos yar oo nadiif ah ka hore iyo xagga dambe ee hore iPhone. Photos waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah in aad si aad u hesho xigasho ka fiican;
9. Sawiro ka qaad qalab aad u isticmaali iPhone, sida headphones, xeedho, fiilooyinka USB, iwm Waa inaad iyaga isugu wada si sax ah. Sanduuqa Original oo gacanta lagu dhigi doonaa waxa ay u muuqataa qumman yahay;
10. Ku bilow cilmi-yar oo ay dadku ku iibin iPhone hore iyo inta ay ka heli (aad Qaybta 1aad eegi kartaa), sida loo qeexo xaaladda aad iPhone (ha overrate, laakiin sharax hab fiican);
> Resource > iPhone > Halkee iyo Sidee loo iibi Old iPhone qiimo wanaagsan